Yotpo: Sanganisa Zvemagariro Ongororo pane Yako Ecommerce Saiti | Martech Zone
Chipiri, Gunyana 3, 2013 Muvhuro, September 2, 2013 Douglas Karr
70% yevatengi vepamhepo vanoti wongororo dzine chekuita nesarudzo yavo yekutenga (mabviro). 60% yevatengi vepamhepo vanoratidza kuti kuongororwa ndiko kwakanyanya kukosha pakusarudza chigadzirwa. Uye 90% yevatengi vepamhepo vanovimba kurudziro kubva kuvanhu vavanoziva. Uine izvo mupfungwa, kambani yega yega inoda kushandisa kutora kutora wongororo pane zvigadzirwa uye masevhisi.
Ongororo ine matambudziko kune ecommerce saiti, asi
Ongororo inokwezva ese SPAM uye inauthentic wongororo kubva kune vashoma-kupfuura-vakangwara vanokwikwidza.
Paunenge iwe waita ongororo, kiyi yekutora akawanda sezvaunogona sezvo zvigadzirwa zvigadzirwa zvine zvishoma / hapana ongororo hazvivimbike.
Hakuna kumbove nekubatanidzwa kwakasimba kwema ecommerce ongororo masisitimu uye vezvenhau.
Yotpo inotarisira kuchinja izvi kuburikidza nepuratifomu yavo yekuongorora, zvichigonesa zvitoro kuti zvigadzire kuwongorora kwakawanda kwezvigadzirwa zvavo, uye vazviratidze zvakanaka. Heino rwendo rweakakosha maficha uye mashandiro eYotpo.
Kuunza Ongororo - Haufanire kurasikirwa nemawongororo ako aripo kuti utange kushandisa Yotpo. Tichatumira zvisina wongororo wongororo kubva kune chero chikuva chauri.
Mutauro Kugadziriswa - Yotpo inoshandiswa pasi rese. Widget yedu inoshandurika nyore nyore mune chero mutauro unozivikanwa nemunhu.
Tarisa uye Unzwe Kugadziriswa - Chitoro chako chakasiyana. Isu tinozviremekedza izvo uye tinopa akasiyana siyana maitiro, zvese zvewidget yedu uye iyo Email Mushure mekutenga email.
Simba Rine Mwero Zvishandiso - Unogona kusarudza zvirinani kuti zviongororwe zvekuratidzira uye zvekuviga Pese paunogamuchira ongororo nyowani, tinokuzivisa iwe kero yevatengi yeemail, kuti iwe ugone kutenda mutengi iyeye kana kugadzirisa chero nyaya dzinogona kunge dzakamuka.
Tsamba Mushure mekutenga - Zvinoshamisa kuwedzera wongororo. Yotpo inongotumira email kune vatengi vako, panguva yakatarwa mushure mekutenga, kuvakurudzira kuti vasiye ongororo. Vatengi vanogona kusiya wongororo zvakananga mukati meemail, zvichiita kuti maitiro acho ave nyore.
Mukati-Kudzika email analytics - ona mashandiro eemaimeri ako ane yakadzika analytics.
Kurudzira Yako Yemunharaunda Nharaunda - svikira vatsva vangangoita vatengi nekuburitsa ako matsva ongororo zvakananga pamapeji ako enharaunda. Yotpo inokupa iwe mukana wekutenda vanoongorora paFacebook neTwitter. Vateveri vako vanogona kusiya zvirevo uye tinya pane zvakatumirwa kuti uverenge maongororo. Unosarudza kuti ndedzipi ongororo dzinoburitswa.
Zvemagariro Denderedzwa - Kurudzira vatengi vako kuti vagoverane ongororo yavo munzira dzekudyidzana. Mushure mekunge shopper asiya ongororo, Yotpo inoita kuti zvive nyore kwavari kuti vazvigovane paFacebook, Twitter, Google+, uye LinkedIn.
Kuongororwa nemumwe munhu akatenga chigadzirwa kubva kuchitoro chako kwakakosha kupfuura kudzokororwa neanongo pfuura. Yotpo inopa mabheji kune mumwe nemumwe muongorori, uye anotara ongororo zvichienderana nekutendeka. Izvi zvinowedzera dura rekuvimba iro rakaratidzirwa kubatsira kutyaira kutengesa. Vangangoita vatengi pakupedzisira vanoziva kuti vanogona kuvimba nezvavari kuverenga. Yotpo inopa varidzi vezvitoro suite yakakura yeakadzika analytics kuitira kuti ikubatsire kuti unzwisise zvinoita vatengi vako uye nezvavanoda kuona zvichivandudzwa.
Yotpo yakasununguka kushandisa kana iwe uri mudiki kune wepakati saizi bhizinesi. Kune masaiti anogadzira anopfuura mamirioni 1 peji maonero / mwedzi, isu tinopa Yotpo Enterprise.
Tags: ecommerce wongororomahara ongororoproduct product reviewskuongorora kwevanhu
Sep 3, 2013 pa 6: 37 AM
Ndatenda kwazvo Douglas nechakanaka posvo paYotpo. Zita rangu ndinonzi Justin Butlion uye ini ndiri weKushambadzira maneja weYotpo. Ndinokugamuchira iwe uye chero wevaverengi vako vane chero mibvunzo yekupindura pazasi kana kana zvichidikanwa, kuti undibate neemail pa justin@yotpo.com.
Sep 5, 2013 pa 1: 40 AM
Ongororo huru, Douglas. Yotpo inoshanda mushe neMagento. Ini ndinoda maitikiro azvinoita iwe kuti utange kuvaka ako maficha magirafu evawongorori vako.